J: Food - summer roll
ကော်ပြန့် လေးက စားချင် စရာလေး သရေတောင် ကျလာပြီ၊ ကော်ပြန့် စိမ်း အရမ်း ကြိုက်တယ်၊ ကော်ပြန့်စ်ိမ်း လုပ်နည်းလေး အတွက် ကျေးဇူးပါ၊ ကိုဂျေ ကြည့်ရတာ တော်တော် သဒ္ဒါတရား အားကောင်းတယ် ထင်တယ် တကမ္ဘာလုံးက တွေ အတွက် ကြက်သား(သို့) ၀က်သား ၅၀ ကီလိုတဲ့ မနည်းဘူး စားရမှာ နုတ်နုတ်စင်း နေရတာနဲ့ တင် လက်အံ့ သေမယ် တင်တယ် ၊ ဘလော့ဂ်ဂါ
i have eaten this before!
really really nice nice..hee..
The pix looks super delicious wor..